फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - धूर्तहरूको गोलमेच सम्मेलन
धूर्तहरूको गोलमेच सम्मेलन देवी चापागाईं
हाम्रा भाषाविद्हरू, शब्दनिर्माणकर्ताहरू कम चतुरा थिएनन् । हरेक मानिसको कर्मअनुसारको नाम जुराइदिइहाल्थे । तिनै पुर्खाको बुई चढेर आज हामी पनि अड्कल अनुमानको झोली तुम्बा भिरिहाल्छौँ । कहिले शब्द, अर्थ र व्यवहार बीचमा प्रणयसूत्र नै जोल्ठिँदैन । आचरण र अभिव्यक्ति उचित ढङ्गबाट छानबिन हुन खोज्दछ । बाठो र टाठोको बीचको भेद ठम्याउन असमर्थ भई यो बाटो, उबाटोको द्विविधामा चेपिन पुगिन्छ । अनि डेढ अक्कली तर्कमा सक्कली शब्दजालको लिपपोत गरिन्छ । भनिन्छ यी दुवै समानअर्थी छन् । के बाटो कस्तो टाठो ।
भाषाका अनुरागी निर्धक्क बोलिदिन्छन् गहिराइमा गए सिल्टिमुर खाइन्छ । धूर्तलाई निकट वा दूरस्थलबाट व्याख्या विश्लेषण भएको छ । उचाल्ने, पछार्ने र दोचार्ने कर्मका चतुराहरू धूर्त छन् जसले आलोचना जान्दैन । प्रसैसाका बहुरुपी शब्दहरूको शब्दजालमा अर्कालाई फसाउन र निजी आवश्यकताको खाँचो पूरा गरिहाल्ने । आलोचकको दृष्टिमा ‘धूर्तको’ परिभाषा यही हो ।
धूर्त र धूत्र्याइँको परिभाषा दिन नसक्ने को होला र ? तपाईँ भन्नु होला । दुईचारवटा शब्दको झटारो किन हान्यो यति जाबो कुरामा ? मलाई लाग्छ धूर्त शब्द सकारात्मक सोचबाट जन्मिएको परिभाषा नभई नकरात्मकताको गर्भबाट सिर्जिएको हो । कतिपयको परिभाषामा यो शब्द प्रिय नै देखिन्छ । चलाख हुनु नै धूर्त हुनु हो । छेउटुप्पो नै नमिल्ने परिभाषा ओकल्न हाम्रा मै हुँ का पारखीहरू कम कहाँ छन् र ! परिस्थिति, परिवेश र पर्यावरणको अध्ययनको जोडजाडको नौनी निष्कर्ष चलाख हुनु हो । कमजोर पात्रको कमजोरीको रासी चुल्याउँदै आफूलाई ठूल्याउनु यसको परिभाषाभित्रको वास्तविकताको आँचल हो कि ?
धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक सबै तहका मनुवाको वाचनाभिव्यक्ति कम रोचक छैन । आफूअनकूलको परिभाषामा शब्दहरूलाई ढुन्मुन्याउँन पाउँदा उफ्रीउफ्री नाच्छन् । ढाड भाँचिने गरी भाषालाई प्रहार गर्दा पनि मूकदर्शक बन्दछन् । आफूलाई सुपथमा ल्याउने जमर्को फिटिक्क देखाउँदै्रनन् । जीवनलाई अरुको भार नबनी जिउनुलाई शायद उत्कृष्ट मानिएला । आफ्नै बल बुताको हिसाबले पाखुरीमा बाँच्नेहरू समाजको नजरमा नेप्टिएको चेप्टिएको र थेप्चिएको देखिन्छ । पराइलाई कर्काउन, मर्काउन, थर्काउन जान्नेहरू कम लोभलाग्दा छैनन् । आज म धूर्तहरूको तीव्र उन्नतिका केही चना चटपटे चखाउन चाहन्छु ।
गोलसिमल चौरमा धूर्त सम्मेलनको आयोजना गरियो । केही बोकेदारीका झुण्डले यो सम्मेलनको तयारी र अर्ध तयारी गरको थियो । कार्यक्रमका आयोजकहरू हर्षित मुद्रामा दायाँबाया माया साटासट गरिरहेथे । बोलीमा बोक्रिएको भेटिन्थ्यो । केटाकेटीहरू दश–बाह्र जनाको हुलमा यताउति मर्किरहन्थे । दिनको बाह्र बजिसकेको थियो । मञ्चबाट बेलागाम पप सङ्गीत थर्थराइरहेको थियो । मञ्चबाट एउटा लोखर्केपुछ«ेले खोक्यो । अब आरम्भ हुँदै छ धूर्तहरूको सम्मेलन । अब पहिलो वक्ता थियो भोटाङका गिर्मी दोर्जे । ऊ हँसिलो मुद्रामा मञ्चतर्फ लम्कियो । भाषणको पर्रा छोड्यो त्यस पटमूर्खले ।
आबु मा यो कार्जेकरममा पाल्नुभएका बा, आमा, दिदीबहिनीलाई नमस्कार गर्दछु । हेर्नुहोस् यो नेपाल मूर्खाको मूलुक हो । यहाँ नाइटक्लब खोल्नु दिन्दाइन । दिदीबहिनीलाई आराम पनि हुने । पाइसो पनि लठपत्तर । छोरी बुहोरी हुनेले
कुनै घिन नमान्नुस् दुई वर्षमाइ मो यस्तो तेसोइए बान्यो र । मोइले दिल्लीमा कति आइमाई लग्यो कमाउने साजिलो बाटो रोज्नुस् । मो योभन्दा बढी बोल्दाइन । खोलबहादुर कँडेल दोस्रो वक्ता थियो । उसले भाषणको क्रममा चकित
बनायो सबैलाई । म्यानपावर कम्पनी खोलेछ उसले । सबैलाई कोरिया लैजान्छु भन्दै असुलेछ पाँच–पाँच लाख रूपैयाँ । जोसँग पैसा लिएको हो उसलाई एक÷दुई वर्ष झुलाईदिएछ । त्यही बीचमा पैसा जति सहरमा जग्गा प्लटिङमा लगाएछ । एकमुष्ट रकम नदिई दुईचार हजार गरी तिर्दैै दश वर्षमा चुक्ता गरिदिएछ । यस्तो अति वेइमानी काम गर्न सफल भएकोमा लोखर्केचुल्ठीले ताली बजाई अनुमोदन ग¥यो । तेस्रो वक्ता थियो धलाने स्याङबो । त्यो फटाहाले गजपको शैली अपनाएछ । त्यो जग्गा प्लटिङ मेरो हो पैसा दिनुहोस् म तपाईँलाई बाँकीमा जग्गा दिउँला भन्दै नरनाता साथीभाइ सबैलाई झुक्याउँदै नगद असुलछ । जब दिएको समय बितिसक्यो जग्गावालाले बेइमान ग¥यो भन्दै्र म पैसा नै तिर्दछु बरू कागज गरौँ भन्दै हिँडेछ । इमान्दार नै हो आफँैले कागज गर्दछु भन्यो भन्दै पैसा दिनेहरू दङ्ग परेछन् । पछि न पैसा न कागज । यसरी दाम जुटाई मोजमज्जा लुटेछ त्यस बजियाले । त्यसलाई पनि लोखर्केचुल्ठीले हार्दिक स्वागत ग¥यो ।
चौथो वक्ता थियो कसौँडीनाथ खतिवडा– उसले लेखनदासको पेशा अपनाएछ । गाउँघरका सोझा सीधालाई तेरो जग्गाको यो मिल्या रहेनछ, त्यो मिल्या रहेनछ भन्दै मिलाइदिने बहानामा सबैसँग दुई चार हजार गरी उठाउँदै
हिँडेछ । करिब पच्चीस गाउँबाट दश लाख रूपैयाँ उठाएछ र उक्त पैसा सहराँ लगेर खन्याएछ । त्यसपछि कोहीकोही मात्र तैँले मलाई ठगिछस् भन्न आउँथे उसलाई दुई चार सय गरी दिँदै जाने । माग्न नआउनेलाई वास्तै नगर्ने पछि
भेट्या ठाउँमा यो मिलाएँ त्यो मिलाएँ भन्दै झुलाउने एक दुई कप चिया खुवाउँदै पठाइदिने । यसरी उसले राजधानीमा बङ्गला जोडेछ । यसलाई पनि लोखर्केचुल्ठीले स्वागत ग¥यो ।
पाँचौँ वक्ता रामनाथ वस्ती– तपाईँको लगायत परिवारको ग्रहदशा खतम छ भन्दै हिँड्ने । अलि खर्च नगरे ठूलो खति भई अति हुने त्रास रोपिदिने । डराएर वर्षमा दुईचार वटा शान्ति स्वस्ती भन्याजस्तो । त्यसैबाट स्वयंको हवेली खडा गर्ने आफू पनि खुशी परिवार पनि मस्त । सम्मेलन गजबकै थियो । धूर्तहरूका चमत्कारी चतुरा चना चटपटे
तर्कले मलाई कन्याउन सकेन बरू घिनाउन सफल भएको थियो । बिप्ल्याँटो जीवनलाई लाहाछाप लगाउने हाम्रो सभ्य समाजले भोलि कस्तो परिणाम हात लाउलान् हातले पूर्पुरोलाई केहीबेर थाँक्रो लगाई सोच्न विवश पा¥यो मलाई ।
थेगोको चमत्कार सजीव र निर्जीवको बीच ज्यान हुनु र नहुनुको भेद छैन त ? सजीव भित्र पनि संवेदना पृथक नहोला ? मानव र अन्य प्राणीबीच भाषा यानेकी व्यवस्थित सम्प्रेषणबीच अन्तर नभए के छ त ?
फरक देख्दा देख्दै प्रत्येक मानव छुमन्तर जोड्न पनि हच्किँदैन । आँसु, हाँसो, संवेदना, मनोरञ्जनमा रमाउने, जमाउने, कमाउने, फर्माउने आ–आफ्नै रङ्ग ढङ्ग नाली बेली र वृत्तान्त छन् । मानिसमा सोच्ने, तौलने संश्लेषण र विश्लेषण आ–आफ्नै ढङ्ग ढाँचाबाट गुज्रिएको हुन्छ । मान्छेको बोली, लोलीमा भिन्नै गोली पीपलमेट भेटिनु नै स्वाभाविक मामला हो । मैले घीन नमानी कोट्याउँन खोजेको विषय हो थेगोको स्थानप्रवेश । यहाँहरूलाई झनक्क फन्कन मन लाग्ला कि समालोचकले गरिसक्या संश्लेषण विश्लेषणमा यसको किन यस्तो चुरीफुरी । कामकुरो पारिपाट्टी झिटीगुन्टा वारिपट्टी भनेझैँ किन मात्या होला ?
हाम्रा हजुरबुबा काँसझै फुलेका र बाँस झैँ ठिङ्गीएका मैले देख्न पाएँ । उहाँको कुरोमा वेग्लै स्वाद थियो । यदि उहाँले त्यस्तो कुरो नगर्दा जुरा नभएको गोरूलाई हेर्दाको जस्तो बेस्वाद हुन्थ्यो । नाम्लाङे राडीमा थचक्क बसी माथिबाट
तमाखु ट्वारट्वार तलबाट अपानवायु ढ्वारढ्वार उहाँको परिचित विशेषता । दौतरीका बीच कुरो जोत्दा हजुरको बारम्बार वैरिन्थ्यो । साँखुमा नुन लिन जाँदा खाएको झापट पापडझैँ मीठो मानी बारम्बार सुनाइरहन्थे । झण्डै ज्यान
गाको गुनासो थ्यो उहाँको । बाँच्न सफल हुनुलाई पुरूषार्थ ठान्दै फलाकिनुहुन्थ्यो उहाँ । जसको घरमा बस्या हो त्यो घरको बूढाको नाति हराएको वर्षौँ भाको रछ । मेरो काहिँलो भाइले आमाको गर्भबाट छुट्नासाथ यो धर्ती छोडेको
उद्घोष ग¥यो । त्यो घटना पन्ध्र दिन अगाडि मात्र भाथ्यो । सुत्ने ठाउँ नपाउँदा रात पनि कटनी दुःखको बेलिविस्तारको झटनी हान्ने इच्छाले बूढाले भनेछन् । हजुरको नाति म¥यो । आफ्नै नाति मरेछ क्यार भन्दै घरबेटीको परिवार रून– कराउन पो थालेछन् । पछि सम्झाउन खोज्दा पो रहस्य उजागर भो । बेफ्वाँकमा त्यस्तो ‘भिक्षु’ लाउने भन्दै हजुरबालाई झम्टेछन् । बूढा परे फसादमा । पिसाब फेर्ने निहुँले भाग्न खोज्दा भैँसीको कीलामा ठेल हसुर्दै तीन कान्लामुनि मुन्टिएछन् ।
थेगोको आगोले पोलेको केही मानिसका गुनासाहरू मैले सुनेको थिएँ । अघि पगितै गाउँ चाहार्ने मेरो बानी थियो । आमाले कान्छो भाइसँगै जाने गरी बिदा लिइहाल्नुभो । सानामै टुहुरो हुनु परेकोले मेरा बालआवश्यकता सबै पूरा
हुन सकेका थिएनन् । खाना खाने बेलामा प्रायः अरुका दलानमा पुग्ने हुनाले मेरो नाम ढुके राखिदिएका थिए आफन्तले । म थरले ढकाल थिएँ ।
कसैका पिँढीमा पुगे पनि नपुगे पनि नाम जसरी पनि बसिहाल्थ्यो भन्ठानेर म रोजै गाउँ डुल्दथेँ । गाउँका हुनेखानेहरूले थेगो प्रयोग गरी जुँगा मुसारेको अभिमान उफारेकोमा मख्ख परी आफू पनि थेगो जोड्ने तम्तयारीमा थिएँ । तर उपयुक्त थेगो जिब्रोमा झुल्किएको थिएन । नढाँटी खरोखास भनौँ थेगो प्रयोग गर्नें सामथ्र्य नपलाएको अड्कल मेरो थियो । माथ्ला घरकी हजुरआमालाई एकपटक साँच्चै लाजमर्नु पारेछ थेगोले ।
एकपटक सुरूमा मामासम्धी र माइजुसम्धीनी भान्जी सुत्केरी हुँदा उहाँकहाँ भेट्न आएछन् । वैष्णवी भएकाले लसुन प्याजको सङ्ग्रह नै गर्दैनथे रे सम्धीसम्धिनीले । हाम्री माहिली हजुरआमाको थेगो रहेछ ‘लसुन पिँधेर’ । पधेँरामा सम्धीसम्धिनी नुहाउन लाग्या बेलाँ उहाँ पनि पानी लिन पुग्नुभएछ । छिट्टै गुर्नपर्ला है हजुर मैले भान्सा तयार पारिसकेँ लसुन पिँधेर । यति भनेर बूढीमाउ घरतर्फ हान्निनुभएछ । पछि निकै बेर पर्खिँदा पनि सम्धीसम्धिनी नआउँदा बोलाउन धारामा जानुभएछ उहाँ । धारामा पुग्दा पो पत्ता लागेछ ।
लसुन हाल्या तरकारी कसरी खाने बरू यतैबाट जाने भनेर उहाँहरू घरतर्फ लाग्नुभएछ । त्यो घटनाले उहाँलाई भदौरे भेल नै ल्याइदियो अरे । बाटाघरे दन्तद्वारे बा पलाँति जाँदा ठूलै समस्यामा फसेछन् । बाटोमा हिँड्दै गर्दा भोकले इन्तु न चिन्तु बनाएछ उनलाई । जठराग्नीको आगो शान्त पार्न उनलाई साँच्चै कठिन भएछ । बाटामा एउटी बूढीलाई भेटेर प्याच्च भनिहालेछन् । यताउति कतै खान पाइन्छ आमै, मकै भुटेर । उनको थेगो थियो मकै भुटेर । त्यस ठाउँमा अरु सबै पाइए पनि मकैको अभाव रहेछ । बिचरा दन्तद्वारे बा जति घरमा जान्थे निराशा नै निराशा पाउँथे । भोकले धेरै सताएपछि पापी अपराधी गाउँले भन्दै कुर्लँदै हिडेछन् । त्यही बेला गाउँलेहरू जम्मा भई भकुन्ड्याएछन् उनलाई । पछि कुरो बुझ्दा त आफ्नै थेगोले हन्डर पाएको बुझेछन् ।
त्यसपछि रातो मुख लगाउँदै छिटोछिटो त्यो गाउँ छाडेछन् । खाल्टेका शिक्षक पद्मराम रोकायाको लास खँड्कुले खोल्सामा भेटिएछ । बिचरा माडसाहेब अध्यापनमा बहुतै राम्रा थिए । गाउँलेहरू बीच गाइँगुईँ चल्न थाल्यो । कसरी यस्तो हुन गो । गाउँका जान्ने सुन्नेदेखि सार्वजनिक बाटो हग्ने मुत्ने सम्म चुक्चुकाउन थाले । उनको पनि थेगोले नै प्राण पखेरू उडाएको रहेछ । उनको थेगो थियो– ‘म्वाइ खाएर’ ।
थेगो समाजमा मनग्गे प्रयोग हुन्छ । नेपाली भाषाले हजारौँ सन्तानरुपी थेगो जन्माएको छ । त्यसका नाति नातिना, पनाति पनातिना जन्मिदा अझ कति पो हुने हुन् । तिनलाई सन्दर्भ अनकूल प्रयोग नहुँदा गोताको नौ मुरी स्वाद
नभेट्टिने कुरै भएन । तपाईँ गम्नोस् यी थेगोहरूले क–कसलाई कहाँकहाँ पु¥याउला ? कस्तोकस्तो बनाउला । कोदो कुटेर, मस्याङ टोकेर, गाला ठोकेर, अचार साँधेर, आँखा तरेर, मास छरेर, कपाल कोरेर, धक्का लाएर आदिआदि
अरु क्षेत्रलाई पनि नियालौँ । शिक्षा र निजामती क्षेत्र – घण्टी ठोकेर, आत्मा चिरेर, चक घोटेर, टेबुल ठोकेर, हाजिर लुछेर, भर्पाइ ठेसेर, तलब गनेर, पेश्की तिरेर, डस्टर फ्यालेर, कपी कोरेर, कृषि क्षेत्र – चुल्हो ठोसेर, धान कुटेर, नाङलो धुमाएर, चाल्नु केलाएर, बेसार हालेर, चिकित्सा क्षेत्र – डोज पेलेर, हर्लिक्स घोलेर, सिसी खोलेर, रगत तानेर राजनीति– चुनाव हारेर, अविर लाएर, नारा घन्काएर, ताली पड्काएर, मुन्द्रे खटाएर, विपक्षी तर्साएर ।
अचेल आर्जित अनेक व्यवहारहरू अनुकरणको पुष्टकारीबाट सिर्जित छ । आहार, विहार, व्यवहार, सेभार यी सबैमा अनुरकणको सरूवा रोगले मनग्गे छोएको छ । सक्कललाई अक्कल लगाएर नक्कल जन्माउने अभिप्राय सबैमा
घुसेको छ । बोलीको पारखी, लोलीको लालची, टोलीको मारूनी, सबैमा जीवन जिउने कलामा अति मध्य र न्यून रुपमा भए पनि अनुकरणको छायाँ, माया छिपेको छ । धर्म, संस्कृति, कला, गला, परिपन्च्याइँ हरेक क्षेत्रमा सिरौँला
मुठ्याएझैँ थेगोलाई नअठ्याउँदा वेश हुन्थ्यो कि जनताजनार्दन ।